Xa i-Instagram ikuxelela ukuba awufumanekanga ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 12, 2019 0 IiCententarios 8466
Yintoni eqhubekayo xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki? Ngokuqinisekileyo kwenzeka kuwe ukuba uye kwiprofayile yomhlobo wakho Instagram kwaye loo myalezo ucaphukisayo ubonakala kuwe; Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba oku kwenzeke. Apha kweli nqaku siza kuthetha ngezizathu ezinokubakho xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki.
Lo myalezo uhlala uvela xa umntu ekuthintele kwinethiwekhi yentlalo. Kwakhona xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki Kungenxa yokuba xa sele uvaliwe, inethiwekhi yoluntu ikususa ekusebenziseni amalungelo, kule meko jonga okanye unxibelelane nomntu okuvimbileyo.
I-Instagram ikuxelela nini umsebenzisi ukuba akafumaneki? Fumana apha!
Ngoku, xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki Kuya kufuneka ufumanise kwaye ujonge ukuba bakunqanda na okanye kwenzeke enye ingxaki. Enye yeendlela eziqhelekileyo zokuqinisekisa kukuya kwisiphequluli kwimodi ye-incognito kwaye uthayiphe ibha yokukhangela i-URL ye-Instagram ngokongeza igama leprofayili lomntu ofuna ukumkhangela.
Kwimeko apho iprofayili ibonakala kuwe ngendlela eqhelekileyo, ngaphandle kokungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram, oko kuthetha ukuba banqande ngokuqinisekileyo. Kwelinye icala, ukuba ihlala ikubonisa umyalezo ofanayo osuka xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki Kuthetha ukuba umntu ucime okanye uvale iakhawunti yakhe kwinethiwekhi yoluntu.
Ngamanye amaxesha, kuyenzeka ukuba umvalele umsebenzisi, kwaye nangona ungayivulanga ufumana umyalezo ofanayo Kwenzeka xa iprofayile ivaliwe kwiqonga le-Instagram ixesha elide kakhulu. Ukuba oku kunjalo, sichaza indlela yokuyisombulula.
Amanyathelo okuvula umsebenzisi
Fumana iphawu lomfanekiso kunye nokufikelela kwiakhawunti yakho.
Emva koko faka i icon yeseto ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene.
Nje ukuba ukhetho luboniswe, khetha enye ethi "Useto".
Emva koko, khetha u- "Bucala kunye noKhuseleko" ukhetho.
Nje ukuba kwenziwe, faka icandelo lee "akhawunti ezikhutshiweyo".
Apha uza kuboniswa uluhlu lwabo bonke abantu obathintele kwinethiwekhi yezoluntu. Khetha le ofuna ukuyivula.
Okokugqibela, kuya kufuneka ukhethe ibha eya kuvela ngezantsi, kwaye ucofe ku "vula".
Nje ukuba onke la manyathelo agqityiwe, ungaya kwiakhawunti yakho oyikhethileyo kwaye ujonge ukuba "umsebenzisi akafumanekanga" umyalezo awusabonakali. Ukuba kunjalo, kungenxa yokuba uvule ngempumelelo umsebenzisi kwaye banokunxibelelana bobabini.
Ungamvulela njani umsebenzisi ondivalele kwi-Instagram?
Abasebenzisi abaninzi kwi-Instagram bayazibuza ukuba kunokwenzeka oku, kwaye akunjalo. Isekho indlela ekuvumela ukuba wenze isenzo. Ukuba umsebenzisi ukuvalele akukho kubuya umva, ngaphandle kokuba loo mntu uthatha isigqibo sokukuvulela ithuba. Kwimeko apho uye wahluka, kungcono ukuqwalasela incoko yakho kunye nokulungisa imeko yangaphandle kwinethiwekhi.
Ngoku, xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki Kukwakhona ukuba kungenzeka ukuba nguwe owenze ibhloko. Sicebisa ukuba ulandele amanyathelo achazwe apha ngasentla. Ngale ndlela, unokunxibelelana kwakhona nomnye umntu kwaye ngokuchasene noko.
Impazamo yokuvula umsebenzisi we-Instagram
Elinye lawona matyala axhaphakileyo kwi-Instagram kukufumana abantu abaye bavalwa ngenxa yokuba baye bafumana umahluko wobuqu. Ngoku, yakuba imeko isilungisiwe, baya kwiprofayile yomsebenzisi ukuyivula, kodwa bafumana ingxaki kwifom yomyalezo. Xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki kwiprofayile yomntu lowo, kuya kufuneka uye kwenye indlela yokuyivula; Yiya kumanqanaba esichaze ngasentla.
Esinye isizathu, xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki Ngaba omnye umntu ukuvalele. Kule meko, xa zombini iiprofayili zivaliwe, kwaye abayi kukwazi ukubona imisebenzi eyenziweyo ngomnye. Unokuzibuza, kwenzeka njani ukuba omnye umsebenzisi andivimbe ngaxeshanye nam? Inyani yile yokuba kunzima, kodwa ayinakwenzeka.
Nangona kunjalo, ngenxa yenkqubela rhoqo kunye nokuhlaziywa kwe-Instagram isenzo esinokuthi senziwe. Oku kungenxa yolwandiso olungenakubalwa kunye nokusetyenziswa kwesoftware ekuvumela ukuba uthintele umntu okuvimbileyo kuqala. Kungenxa yoko, amaxesha amaninzi xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki kwaye sele uvulele umsebenzisi, kungenxa yokuba ukuvimbe.
Nangona kunjalo, oku kunokwenzeka kwakhona ngenxa yeempazamo zesicelo; Inokuhlala iiyure ezimbalwa. Ukuba iyaqhubeka sicebisa ukuba ukhuphe kwaye uphinde ufake kwakhona isicelo, ngale ndlela iya kuhlaziywa.
I-Instagram ikuxelela nini umsebenzisi ukuba akafumaneki?
Njengoko besitshilo ngaphambili, xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki, okanye xa uthintela umntu aze yena anyamalale kuluhlu lwakho oluvaliweyo, kunokwenzeka ukuba umntu uyicime iakhawunti yakhe, ayicime okanye akuvale ngenxa yezicelo okanye izandiso esizichazile ngentla.
Ukuba ufuna ukukuqinisekisa oku, unokufumana umhlobo olandela loo mntu kwaye akujonge ukuze ubone ukuba uyayicima i-akhawunti yakhe. Olunye ukhetho kukuba uye kwisikhangeli kwaye ukhangele indlela ye-incognito iprofayili yaloo mntu ngaphandle kokufaka i-akhawunti yakho ye-Instagram.
Enye into enokwenzeka kukuba ngenxa yezicelo kunye nezandiso esithethe ngazo ngaphambili, umsebenzisi uye waqonda ukuba uyivimbile, kwaye ke ngoko ukwivalile. Ayisiyo into ekufuneka yenzeke, kodwa ilizwe leenethiwekhi zontlalontle ligcwele curiosities ezininzi.
Kwimeko apho uye wavula umntu kwaye waqonda ukuba lomntu ukuvalele, zikhona izisombululo ezinokuba luncedo kwezi meko. Okulandelayo, siya kuthetha kancinci ngayo.
Omnye wokuqala onokufaka kuwo isicelo kukujonga ifoto apho loo mntu umakwe khona kwaye uzame ukufaka iprofayili. Ekuqaleni, i-Instagram inokukunika umyalezo "umsebenzisi akafumanekanga", sukuncama. Qhubeka nokuzama de ubone amanqaku amathathu abonisa useto kwikona ephezulu ngasekunene kweprofayili. Xa sele ivelile, uyayikhetha, ukhangela ukhetho "lokuvula", kunye ne-voila! Ngoku ungabona iimpapasho zomntu kwakhona.
Kwimeko apho oku kungasebenzi kuwe, kukwakho nesinye isicombululo. Zama ukungena kwikhompyuter, kuba kufuneka ukhuphele usetyenziso lwe-Instagram kwiVenkile kaMicrosoft. Nje ukuba kwenziwe, landela onke amanyathelo achazwe ngasentla ukufumana iprofayili kwaye uyivule.
Iakhawunti yakho ye-Instagram eyevaliweyo: Yintoni omele uyenze?
Ukuba ufike apha kungenxa yokuba mhlawumbi ulixhoba le-Instagram kunye nokuvalwa kwayo iakhawunti ngaphandle kwesizathu. Kungenxa yoko ngeli nqaku, siya kuthetha ngezisombululo eziphambili onokuzisebenzisa ukuvula ulwazi kwiakhawunti yakho ye-Instagram kwaye ukwazi ukuyisebenzisa ngokuqhelekileyo kwakhona.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba ezi zisombululo zisebenza kuphela kwiiakhawunti ezikhutshiweyo okanye ezikhubazekileyo ze-Instagram. Ukuba, kwelinye icala, i-Instagram iyicime iakhawunti yakho, ezi ngcebiso azinakusetyenziswa. Ukuba le yimeko yakho, sicebisa ukuba udale i-akhawunti entsha ye-Instagram.
Indlela elula yokwazi ukuba i-Instagram ivinjiwe okanye ikhubazekile iakhawunti yakho, kukuba xa ungena, kuvela umyalezo olandelayo: "Iakhawunti yakho yenziwe yasebenza." Oku kuthetha ukuba iakhawunti yakho isasebenza, kodwa awuyi kukwazi ukuyifumana. Ngokwesiqhelo, oku kwenzeka xa wophule imigaqo-nkqubo okanye imigaqo yokusetyenziswa kweqonga.
Ukuqinisekisa ukuba iakhawunti yakho itshixiwe kwaye ayicinywanga, sicebisa ukuba ungene kwenye ifowuni. Ukuba unako ukufikelela kwiprofayile yakho, ziindaba ezilungileyo ezo, kuba azicinywanga. Kule meko, i-Instagram ivimbele ukufikelela kwi-akhawunti yakho kwifowuni apho uyenzileyo.
Inokukunomdla: Ungazi njani ukuba uvaliwe kwi-Instagram?
Xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki: Phinda ufikelele kwi-akhawunti yakho!
Ngokwesiqhelo, xa i-Instagram ibhloka iakhawunti, into eyenziwa liqonga ibhloka isazisi sakho okanye iakhawunti yakho kaGoogle. Kwimeko apho usebenzisa ifowuni ye-Android, into ekufuneka uyenzile kukudala iakhawunti entsha kaGoogle. Okulandelayo, siza kuchaza amanyathelo ekufuneka uwalandele:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukukhipha i-Instagram app.
Nje ukuba yenziwe, yenza i-backup kuyo yonke ifowuni.
Qala kwakhona ifowuni yakho kwimeko yayo yomzi mveliso. Qinisekisa ukuba ugcina ngokupheleleyo idatha yakho, kuba ziya kususwa ngokuzenzekelayo.
Yenza iakhawunti entsha kaGoogle.
Nxibelelanisa iakhawunti entsha kwifowuni yakho.
Okokugqibela, khuphela kwaye uphinde ufake i-app ye-Instagram kwakhona.
1 I-Instagram ikuxelela nini umsebenzisi ukuba akafumaneki? Fumana apha!
1.1 Amanyathelo okuvula umsebenzisi
2 Ungamvulela njani umsebenzisi ondivalele kwi-Instagram?
2.1 Impazamo yokuvula umsebenzisi we-Instagram
3 I-Instagram ikuxelela nini umsebenzisi ukuba akafumaneki?
3.1 Izisombululo ezinokwenzeka
4 Iakhawunti yakho ye-Instagram eyevaliweyo: Yintoni omele uyenze?
4.1 Xa i-Instagram ikuxelela ukuba umsebenzisi akafumaneki: Phinda ufikelele kwi-akhawunti yakho!
Xa i-Instagram ivala i-akhawunti
Julayi 13, 2019